Isxaydxaydka maad dhimi?..W/Q Khadar Faarax Siciid,
Isxaydxaydka maad dhimi?..W/Q Khadar Faarax Siciid, 0 Monday 10th April, 2017 in Aragtida Dadweynaha by Xarunta Dhexe Visits: 107
Isxaydxaydka maad dhimi?..W/Q Khadar Faarax Siciid, Maamulayaasha aan aqoon iyo karti hoggaamineed lahayni ma xammili karaan dad astaamahaa iya ba ka maqan ku qalabaysani in ay ka hoos shaqeeyaan. Aad waxa ay u door bidaan dad ka ay hawlgashanayaan in ay ahaadaan indhaw garato dheguhu awdan yihiin, indhahana habeeno iyo caad ka fuushanyahay.
Gorfaynta fashilka maamul xumadoodu sabataa uga ma duwana leebab mariidaysan oo bu’aha beerwaynaha laga ga liishaamayo. Taas ayaan sababta , cidkasta oo ay ka dareemaan ku baraarugsanaanta ceebahooda in ay faquuqaan, degaan-maamuleedkooda na ka durkiyaan. Iyaga oo ka wewersan turxaamahooda maamuleed in ay si uun u muujiyaan, ayaa ay hal abuurayaasha curinta og iyo indheergaratada dhul shishe wax ka bidhaamin kara ba si, ama si kale u bahdilaan, cadaadin iyo cabbudhinna u saaraan.
‘Tuke nasiib uu caano ku helo wuu leeyahay, nasiib uu ku calfado se ma leh’ ayaa ay soomaalidu tidhaahdaaye, maamulaha jilicsanina – sida badan- nasiib uu cid dhalliisha oo tusaalaysa ku helo wuu leeyahay, nasiib uu ku guddoontose ma laha e, baqaha uu ka qabo in kursiga uu dhalada ka ga fadhiyo laga rido ayaa seejisa ka faa’iidaysiga aragtiyaha iibgalka ah ee kuwa dhalliishani u soo bandhigayaan.
Dhanka kalena, shakhsiyaadkan baraarugsan ee haadaanta maamulkoodu ku sii siqayo ka yabaalsani sida badanka waa kuwo loo kuur gashanyahay, la maagsan yahay oo ulo booc ahna loogu tukubayo. Maamul waydlayaashu, si ay shakhsiyaadkan maamulkooda maagsan afka buuxsin uga saaraan; ugu horraynta ba waxa ay ku shirrabaan beerlaxawsi mansab iyo maaliyad dabada kula jira, kolka ay ku kari waayaanna sharafdil iyo milge xumayn ayaa ay uga gudbaan, ugu dambaynta in ay shirqoolaan ayaaba suurtawda.
Hadaba, maansayaraydan hoos, waxa ay isku deyaysaa in ay cabbirto dhibic ka mid ah habfekerka maamul bi’iyayaashaa. Maamule/taliye fulay ah ayaa u dardaar werinaya mid wacyiqabe ah oo shaqaalihiisa ka mid ah. Waxana uu ku yidhi,
1. Xukunkaan hayaa baad
3. Xariifyohow dadaalkani
4. Waa xeelad kale iyo
5. Xil tiraad sida u dhigan.
6. Ku xumee inay tahay
7. Xuubba igama saarroo
8. Xilkan doonistiisaa
9. Xarakaadka keenaye
10. Isxaydxaydka maad dhimi?
11. Mise xaajo godobliyo
12. Xujaan soo tidcaayo
13. Dabinada aan kuu xidho
14. Intaan kugu xambaaroo
15. Xeerar ku cuskadobaan
16. dabadeed ku xooraa?
17. Inta xumaha ruugtee
18. Xin laqooqayaasha ah,
19. Ama xiisad kicinteed
21. Inta ani i xamatee
23.Maxay iskukiin xidhay?
25. Xumahayga fidintood
26.Ma xannaano gaariyo
27. Xoolaad ku haysaa?
28.Sida xerowga jiibiya
29.Maxaad ula xadraysaa?
30.Aan xaqiiq ku siiyoo
31. Runta kuu xarriiqo e,
32.Ha xayirin naftaadoo
33.Xabsi haysku tuurine
35. Xoolaad iga helaysaa
36.Xurmaan kuugu darayaa
37. Xariir iyo balaatiin*
38.Ayaan kugu xidhxidhayaa
39.Dadkaan kaa xigsanayaa
41. Ayaan kugu xawilayaa,
42.Adna xiinka daayoo
43.Xagaldaac ha faallayn
44.Ceebaha ha soo xigan
45. Xanaftana i baalmari
46.Hadalda xajiinta leh
47. Dibnahaaga uun xidho.
*Platinum : Curiye aad u qaaliya oo qurxinta loo adeegsado.
Khadar Faarax Siciid,
Send to your friend Related Xabsiyadii Dalka Soomaaliland Oo Lagu Dhex Dhimanayo + Xaaladda Caafimaad Oo Meel Halis Ah Maraysa Iyo Dhimashada Iminka May 28, 2017
6 Nooc oo kamid ah faaiidooyinka caafimaad ee soonka..W/Q xaaji ismaaciil mulkhiye - May 26, 2017
Maxaadiradda Saaka Iyo Karin News [3 Lagu Bad Baado] Waxa Soo Jeedinaaya Sh Siciid Raage. May 22, 2017